Daawo Soomaaliya oo yeelatay warshad cusub - Latest News Updates
Daawo Soomaaliya oo yeelatay warshad cusub
Muddo 28-sano ah kaddib waxaa bilowday dadaallo dib loogu howlgelinayo warshadihii dalka Soomaaliya, iyadoo iminka si rasmi ah u howlgashay warshad cusub oo sameysa qalabka dhiska isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada Aslubta Dowladda Federaalka ayaa waxaa maanta kormeer ku tegay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha oo uu la socday taliyaha ciidamada Asluubta Jan. Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) ayaa mid mid u booqday qeybaha ay ka kooban tahay warshadaasi xilli ay shaqeyneysay isla markaana soo saartay Bulukeetiga noocyadiisa kala duwan.
“Waxaa farxad inoo ah Madaxweynaha oo kormeeray warshad sameysa qalabka dhismaha lix sano kaddib” ayuu yiri Bashiir Goobe oo intaasi raaciyay in warshadaan ay soo saari doonto dhowaan Laami, dhar iyo qalab kale.
Taliyaha ciidamada asluubta ayaa sheegay inay dhowaan soo saarayaan dareyska ciidamada dowladda noocyadiisa kala duwan, isagoona sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku amray howshaasi in la dedejiyo.
Booqashada Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmeysa xilli mashruuca Is xilqaan oo uu horay ugu dhawaaqay lagu dhisayo goobaha danta guud sida xarumaha Tiyaatarka Qaranka, Madxafka, Maktabadda iyo xaumo kale.